FAMPAHALALANA SY SARY MOMBA NY FIOMPIANA ALIKA BULLWEILER AMERIKANA - ALIKA
Alika mpihetsiketsika Bulldog amerikana / Rottweiler
Dozer the American Bullweiler amin'ny 1 1/2 taona ary 113 pounds eo ho eo— 'Mahafinaritra be izy, manana toetra mahafinaritra ary namana mahafinaritra.'
Ny alika Bullweiler amerikana dia tsy alika madio. Lakroa misy eo anelanelan'ny American Bulldog ary ny Rottweiler . Ny fomba tsara indrindra hamaritana ny toetran'ny karazany mifangaro dia ny mijery ireo karazana rehetra eo amin'ny hazofijaliana ary fantaro fa afaka mahazo mitambatra amin'ny iray amin'ireo toetra hita ao amin'ireo karazana ao amin'ny hybrid ianao. Tsy ireo alika hybrid mpamorona rehetra ireo no noompiana fa 50% purebred ka hatramin'ny 50% purebred. Tena mahazatra ny mpiompy ny miompy lakroa misy taranaka maro .
Dozer the American Bullweiler amin'ny 1 1/2 taona ary manodidina ny 113 pounds mitaingina ny sarety golf
Dozer zanak'alika amerikana Bullweiler amin'ny 6 volana
Dozer the American Bullweiler amin'ny maha alika kely mipetraka eo amin'ny ahitra
Dozer zanak'alika amerikana Bullweiler amin'ny 14 herinandro— 'Izaho dia nividy alika kely tamin'ny sakaiza iray izay niteraka azy American Bulldog (vavy) misy a Rottweiler (lahy). Nanana ny fako misy alikakely 10 . Mahafinaritra ny toetrany ary mahafinaritra be izy. Mankato be ary mikendry ny hampifaly (mitovy amin'ny Rottweiler). Ankafizinay ilay zanak'alikao vaovao, mahafinaritra be izy. '
Dozer zanak'alika amerikana Bullweiler amin'ny 14 herinandro
Duke the American Bullweiler amin'ny 3 1/2 taona -'Duke dia alika tsara tarehy, maniry fatratra ny hampifaly, tena hendry ary mora hampiofana . Izy tokoa no mpiaro ny tranonay sy ny tokontany. Manao fihodinana isa-maraina izy, mandehandeha manodidina ny tokontany, manenjika izay biby sendra nitsambikina ny fefy fiainantsika manokana na nandady tao ambaniny, na dia 'nanenjika' ireo vorona teny anaty ala aza. Lehibe niaraka tamin'ny vehivavinay izy Bull bull , Pixie, ary izy ireo dia namana tsara indrindra . Tena be vava izy, raha tsy manao izany ianao mamaly ny fangatahany avy hatrany dia mihalehibe ny hodiny mandra-panaonao. Tiany amin'ny lohany karazana ny lohany, toy ny tongotrao, sisiny na ondana tena izy. Azo antoka fa bandy saro-piaro izy ary mety ho mpampijaly an'i Pixie, mitaky ny kilalao rehetra ho azy. Mavesatra be izy amboa lap , milanja manodidina ny 115 lbs. Azony atao ny manarona tany kely rehefa mihazakazaka izy, ary 'manandanja' manodidina ny trano rehefa milalao. Tsy hitovy ny tranontsika raha tsy eo izy! '
alika labozia antsasaky ny alika weiner
Duke the American Bullweiler amin'ny 3 1/2 taona
Duke the American Bullweiler amin'ny 3 1/2 taona miaraka amin'i Pixie the Bull bull .
'Sarin'i Gracie ity. Nanavotra an'i Gracie tao amin'ny Oregon Humane Society izahay tamin'ny 2007. Ny taratasiny dia nanambara fa karazan-tsakafo Rott / Shep mifangaro izy. Tena 'Mpiandry' izy ary ny zanako ary tsy nanaiky foana aho hoe karazana mpiandry ondry iza izy. Tamin'ny volana lasa teo dia nentiko tany amin'ny mpitsabo biby izy mba hanaraha-maso azy matetika ary nanontaniako ny dokotera raha misy fomba ahafahany mamantatra ny karazana mpiandry ondry fantatro. Aussie , ary ny zanako dia mieritreritra Anarana . '
'Ilay mpitsabo dia nampahafantatra ahy fa misy izao a Fitsapana ADN azon'ny alika aleha, izay mitovy amin'ny fitsapana ADN azon'ny olombelona atao mba hamaritana ny fiaviana na kolontsaina. Nanapa-kevitra ny hanao ny fitsapana izahay ary gaga be rehefa niverina ny valiny fa Gracie dia fifangaroan'ny Rott / American Bulldog. Mahagaga fa toa ny iray amin'ny sarin'ity karazana fangaro ity izay ao amin'ny pejin-tranonkalanao izy. '
Gracie the Rott / American Bulldog mix (American Bullweiler) toy ny alika kely
Snoop ilay Bullweiler amerikanina olon-dehibe (American Bulldog / Rottweiler mix)
'Ity i Hershey. Izy dia karazana alikaola amerikana Bulldog / Rottweiler mahafinaritra mahafatifaty. Tena mamy izy ary tia manoroka (manipy ny anarany)! Izy dia tena alika kely tony sy milamina. Tiany ny milalao fa tsy faly loatra. Manan-janaka efatra aho, anisany zaza kely roa, ary tsy mba nitsambikina na nandondona azy ireo mihitsy izy. Mpanavotra avy amin'ny fialofana amin'ny tanàna akaiky izy ary feno fankasitrahana izahay satria izy no fianakaviany mandrakizay. '
Hershey ilay alika amerikana Bulldog / Rottweiler mix (American Bullweiler) alika kely
amboa manana lela lava miteraka
rat terrier basset hound mifangaro
alika karmelianina alika husky mifangaro
chiuaua sy yorkie mifangaro alika kely
ruby mena cavalier mpanjaka charles spaniel